Olee otú Idozi SD Kaadị Format Error?
Idozi SD Kaadị bụghị formatted Error na 3 Nzọụkwụ
1 otú ndozi SD Kaadị Format Error?
Mmada ọtụtụ narị foto na 16GB SD kaadị na igwefoto m n'oge m ezumike. Right now mgbe m dị ihe na-eji kaadị na kọmputa m na kọmputa m ghọtara na kaadị ma m nwere ike ịnweta ya. Kọmputa gwara m SD kaadị e Ị. Apụghị m usoro ya kwa. Bụ n'ebe ọ bụla otú ahụ ka m nwere ike nweta m foto azụ SD kaadị? Ezi echiche.
SD kaadị format njehie itịbe tumadi n'ihi kaadị usoro agbajikwa / nrụrụ aka, na-ezighị ezi formatting, virus ọrịa ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Mgbe ụfọdụ, ị pụrụ ọbụna Ọkpụkpọ kaadị. Mgbe ị na-"SD kaadị na-adịghị formatted, ị chọrọ usoro ya ugbu a", i nwere ike na-echegbu onwe ya banyere adịkwa faịlụ niile na SD kaadị n'ihi na ị nwere ike agaghịkwa nweta ha. Ma nke ahụ abụghị n'ezie eziokwu.
N'agbanyeghị na ị na-ekpebi usoro ya ma ọ bụ, na ị na-yiri ka naghachi data mgbe SD kaadị format njehie na a data mgbake usoro dị ka ogologo dị ka ị na-enwebeghị ọhụrụ ọ bụla data gị SD kaadị. Faịlụ gị SD kaadị na-dị nnọọ akara dị ka keerughi data na ị nwere ike mfe naghachi ha na a SD kaadị format njehie data mgbake usoro dị ka Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac. Nke a na usoro nwere ike n'ụzọ zuru okè idozi gị SD kaadị bụghị formatted njehie na weghachi niile data na ya dị ka mbụ. Ọ na-enyere gị aka naghachi nile di iche iche nke faịlụ mgbe SD kaadị bụghị formatted njehie, gụnyere oyiyi, ọdịyo faịlụ, videos, akwụkwọ faịlụ, wdg
Ị nwere ike ibudata a ikpe mbipute nke usoro ihe omume idozi SD kaadị format njehie ugbu a.
2 Idozi SD Kaadị bụghị formatted Error na 3 Nzọụkwụ
Cheta na: Mgbe izute SD kaadị bụghị formatted njehie, ụzọ kasị mma iji debe ihe niile data dị mma bụ ịkwụsị ime ihe ọ bụla na kaadị, ezie na ị ka nwere ike naghachi data ọbụna ma ọ bụrụ na i kpebie Ọkpụkpọ kaadị. Na nke furu efu data nwere ike mfe overwritten site ọhụrụ data na gị kaadị.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode naghachi data mgbe SD kaadị format njehie
Ka na-agbalị gwara SD kaadị bụghị formatted njehie na Windows version nke Wondershare Data Recovery.
Mgbe launching usoro ihe omume na kọmputa gị, ị ga-ahụ ihe omume window egosiputa dị ka n'okpuru. Ị nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode dị ka a mbụ na-agbalị.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị SD kaadị anya n'ihi na faịlụ na ya
Usoro ihe omume ga-egosi na mbanye akwụkwọ ozi gị SD na kaadị window, na ị nwere ike họrọ ya na pịa "Malite" na-ekwe ka usoro ihe omume Doppler faịlụ na ya.
Ọ bụrụ na ị na-ama formatted kaadị, biko họrọ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3 naghachi faịlụ mgbe SD kaadị format njehie
Mgbe scanning dị n'elu, hụrụ faịlụ gị format njehie SD kaadị ga-egosipụta na "Ụzọ" na "File Pịnye" edemede ke window.
Biko ele faịlụ aha ma ọ bụ preview foto / akwụkwọ ego otú ọtụtụ nke faịlụ na gị format njehie SD kaadị nwere ike gbakee.
N'ikpeazụ, ị nwere ike nye akara faịlụ na pịa "Naghachi" idozi SD kaadị bụghị formatted njehie na-azọpụta ha gị na kọmputa.
Cheta na: Biko adịghị na-natara data azụ gị SD kaadị ozugbo mgbe mgbake zere data overwritten.
> Resource> Naghachi> otú ndozi SD Kaadị bụghị formatted Error